ကျမရဲ့နေရာလေး: ဆဋ္ဌမအာရုံ ဆိုတဲ့ sixth sense
ဆဋ္ဌမအာရုံ ဆိုတဲ့ sixth sense
လူတိုင်းလူတိုင်း တခါတလေကြုံဖူးကြမှာပါ။တချို့ အဖြစ်တွေဟာ..ကြိုသိနေသလို၊ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလိုလိုနဲ့ လေ။
စာတွေဘာတွေထဲဖတ်ဖူးတာ၊အဲလိုမျိုးကြိုတင်သိတတ်တဲ့ အာရုံကို ဆဋ္ဌမအာရုံ sixth sense လို့ ခေါ်တယ် တဲ့။ ရုပ်ရှင်တောင်ရှိသေးတယ်။ ကျမ မယ်ငီးလည်း လူအထင်ကြီးအောင်ပြောရရင်တော့ sixth sense ရှိ သယောင်ယောင် (အတင်းစပ်ဟပ်ပြီးပြောကြည့်တာပေါ့...ကွာ @-@ )
အင်း..ပထမ ဇာတ်လမ်းကတော့ ၁၆နှစ် တရက်စွန်းအရွယ်မှာပေါ့..ဒေသကောလိပ်ကျောင်းသူကြီးကို အမ ကကျောင်းနဲ့ နီးတဲ့ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမ ၅မိုင်ခွဲနေရာတခုမှာအဆောင်ဌားပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းတက်
ခါစအချိန်အဆောင်သူတွေနဲ့ လည်းသိပ်မရင်းနှီးသေးဘူး။အခန်းဖော်သူငယ်ချင်းကလည်း လသာ၂ ကတဲ
ကသူငယ်ချင်း..။သူ့ နဲ့ အဆောင်ရှေ့ မြက်ခင်းပြင်ပေါ်က ဒန်းလေးမှာ ဒန်းစီးရင်း လေကန်ဝေဖန်ရေး လုပ်နေ ကြတာပေါ့..။ဒန်းက မြက်ခင်းနဲ့ ခြံစည်းရိုးအလယ်လောက်မှာရှိတာ...။အကြာကြီးဘဲအာလူးတွေပေးရင်း မိုး
ချုပ်စပြုလာပြီလေ..။ အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲ လေချွန်သံ..ရွှီ..ဆိုပြီးကြားတယ်..။ ဒီအတိုင်းဘဲလမ်းမပေါ်မှာဖြတ် သွားတဲ့ကာလသားတွေ အဆောင်ကျောင်းသူတွေကို လေချွန်သံပေးတယ်ဘဲထင်တာပေါ့..။ နောက်ဆက်ခါ
အသံပြုသလိုမျိုးဘဲ...။သူငယ်ချင်းကပြောနေသေးတယ်။ဒီကောင်တွေ အနားကပ်ခြံစည်းရိုးဖြဲပြီးကို အသံပြု
တယ်ပေါ့..အရွှယ်လေးကလည်း ငယ်သေးတော့ ပဲတွေဆက်ပေးနေသေးကြတာလေ..ဟီး...:P ကျမတို့ အဆောင်က စဉ့်ကူဆောင်နဲ့ နီးတော့ အဲဒီက ဘဲကြီးတွေ(ကိုယ်တို့ အတွက်တော့ အသက်အရမ်း ကြီးကွာတယ် လို့ ထင်ခဲ့တယ်လေ) လာပိုးတယ်လို့ ဘဲယူဆတာပေါ့...။
အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ကျမလေ..ခြံစည်းရိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတာ၊သူငယ်ချင်းကသွားမကြည့်နဲ့ ဒင်းတို့ ကိုကရုစိုက်
(သူတို့ တွေအားလုံနီးပါးက ကျမကိုသူငယ်ချင်းလိုထက်သူတို့ ရဲ့ ညီမငယ်ခလေး တယောက် လိုဆက်ဆံ တတ်ကြတယ်လေ၊ကိုယ်ကလည်းခပ်တုံးတုံး အဲဒီတုံးက ဘာမှသိပ်မသိ နားမလည်ခဲ့ဘူး)ကြည့်ရင်းနဲ့ လှုပ်
လှုပ်တခုကို တွေ့ လိုက်တယ်။တဖြေးဖြေးထောင်တက်လာတယ်..ပြီး ကားလာတယ်။ကျမလက်ဝါးအရွှယ်
မီးရောင်နဲ့ ပါးပြင်းထောင်နေတဲ့မြွေမျက်လုံး လက်ကနဲဖြစ်သွားမှ သေသေချာချာတွေ့ ရတာလျှာလို့ ခေါ်
ရမှာလား..သူပါးစပ်က လျှာအရှည်ကြီး အမြီး၂ ခွဆိုတာ အမှန်ဘဲ..၊ပလပ် ပလပ်နဲ့အမေရေ ကယ်ပါ...
လူလည်း လွှားကနဲ ခုန်လိုက်တာ ၃ လှမ်းလောက်နဲ့ မြက်ခင်းပြင်ကျော်ကိုရောက်သွားတယ်။ပါးစပ်က
လည်း မြွေမြွေ အော်ပြီး ပြေးတာ အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်တန်းကနဲဘဲ..ဒီလိုသတ္တိခဲပါရှင်။ဘာလို့ စိုက်
ကြည့်ခဲ့တာလည်းမသိပါဘူး..ကောင်လေးတွေမို့ လို့ လဲမဟုတ်ဘူး..ကျမငယ်ငယ်ကတဲကယောက်ကျား
လေးလိုဘဲနေခဲ့တာ။ကံကောင်းထောက်မလို့ဆက်ပြီးပဲပေးနေသေးရင် အဲတုံးကတဲကသတင်းစာမျက်နှာ
ဖုံးမှာ ပါလောက်ပြီ..:P (အဲဒါကိုမြွေပါးပြင်းထောင်တယ်လို့ ခေါ်တာတဲ့၊လူကိုပေါက်ဖို့ ပြင်နေတာလေ..
နောက်၃ရက်ကြတော့ ခြံရှေ့ မြောင်းထဲမှာတွေ့ လို့အဲနားကလူတွေရိုက်သတ် လိုက် ပါတယ်တဲ့)။
နောက်တခုက ကျောင်းပြီးလို့ ကျိုင်းတုံမြို့ လေးမှာနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ဆောင်းရာသီ..စွမ်တောင်းဘုရားပွဲကျင်း ပတဲ့အချိန်လေ။ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ စွမ်တောင်းဘုရားကတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက် ညကျတော့ လူခြေတိတ်ချိန်မှာ ပွဲခင်းကအသံတွေအတိုင်းသားကြားရတယ်..။"စွမ်"ဆိုတာအထွဋ်အထိပ်က၊ထိပ်ဖျား
ပိုင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး"တောင်း"ဆိုတာ ကြေး ပါ..။အဲဒီဘုရားကကျိုင်းတုံမြို့ မှာအမြင့်ဆုံးစေတီတခုဖြစ်ပြီး ဘယ်နေရာကကြည့်ကြည့်ဝင်းကနဲ ထင်းကနဲမြင်ရတယ်။ ခုတော့ စွမ်ခမ်းဖြစ်သွားပြီလေ"ခမ်း"ဆိုတာ
"ရွှေ" ရွှေထီးတင်လိုက်ပြီဆိုပါတော့။ အင်း..ကြုံတုံး..ကြွားရရင် အဲလေ ပြောရ ရင်တော့ကျမအဖေ ဦးဆောင် ပြီးစွမ်တောင်းဘုရားကို ရွှေထီးဘုရားကပ်ပူဇော်ဖို့ ဘုရားပွဲကျင်းပကြပါတယ်။ (အဖေက မြို့ လေးမှာဘာဘဲ
(ရှမ်းပြည်ရဲ့ ထုံးစံလောင်းကစားတွေ ၄ ကောင်ဂျင်တို့၁၂ကောင်ဂျင်တို့"မာခုတ်ခတ်" ဆိုတဲ့ အန်စာတုံး အကြီးကြီး ၂ ခုလား ၃ခုလားသိပ်တောင်မမှတ်မိချင်တော့ဘူး ကိုသေတ္တာထိပ်မှာ တင်ထားပြီးကြိုး နဲ့ ဆွဲချ
အောက်ကပုံတွေမှာ တိရစ္ဆာန် ပုံလေးတွေပါတယ် အဲဒီပုံတွေမှာပိုက်ဆံထပ်ထားရင် လျှော်ကြေးဘယ်နှစ်ဆ ဆိုတာရတာပေါ့.. ဒီလိုလောင်းကစားဒိုင်မျိုးစုံကိုကန်ထရိုက်ပေး ဘာညာ ဘာညာပေါ့..အဟဲ အဖေမရှိတော့
မှ သမီးဖြစ် သူကပြောပြရဲတာပါ ) ဘုရားပွဲကျင်းပ အဲဒီကဈေးကောက်တွေကောက်၊မြို့ ထဲမှာအလှုခံ..
အားလုံးစုပြီး ဘုရားကိုရွှေထီးချခဲ့တာပါ။အဖေပြောပြပါသေးတယ် မြို့ ထဲအလှုလိုက်ခံတာ မင်းတို့ အမေ ဂုံရှမ်းတွေတကယ်ကပ်စီးနဲဘဲ...တဲ့၊တရုတ်တွေဆိုရင်တကယ်ထဲ့တာတဲ့။ ပိုက်ဆံမလောက်လို့ ဒီလိုလုပ်ရ တာကွ..တဲ့(ရူး..တိုးတိုး..မြို့ ကလူတွေသိရင် ကျုပ်တော့ အထောင်းခံရအုံးမှာ...) အင်း..ပြောချင်တဲ့နေရာ
ကဲပါလေ..လိုရင်းတိုရှင်း..အဖေလည်းသူ့ အလုပ်နဲ့ သူရှုပ်နေ၊ လောင်းကစားတွေရှိတော့ လောင်းကြပြီပေါ့..
ဘိန်းစား ဖိုးသမားလည်း အန်မတန်ပေါများတာကိုး..အဲဒီတုံးကမြို့ ရဲ့ မီးပေးဝေပုံကလည်း ည ၉ နာရီ တိတိ မှာတမြို့ လုံးမီးပိတ်ပါတယ်။ဒီတော့ မီးမပိတ်ခင် ၅မိနစ် ၁ဝမိနစ်လောက်ဆိုရင်အိမ်သာပြေးရပြီလေ။
တောထုံးစံရေအိမ်ကလည်းဟိုး..ခြံနောက်ဆုံးထောင့်မှာ အိမ်က ပေ ၁ဝဝ ရှည်ပါတယ်။အိမ်နောက်ကပ်ရပ်
အဲဒီမှာ ဝိဥာည်တွေဘာတွေရှိတယ် သူရဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ အသေကြောက်တာပေါ့။အိမ်မှာလည်း အမ နဲ့ ၂ယောက်ထဲဘဲရှိတယ်။လူကြီးတွေမပြန်လာကြသေးဘူး။၂ယောက်သားအိမ်နောက်ဖေးပြေးကြပါတယ်။ ၉နာရီထိုးခါနီးပြီလေ..။အိမ်သာက မြောက်ဖက်ထောင့်မှာရှိပြီး ရေတွင်းကတောင်ဖက်ထောင့်မှာရှိပါတယ်။
အမကအရင်ဝင်ပါတယ်။ ကဲ..မယ်ငီး တောင်ဖက်ထောင့်နားက ရေတွင်းဆီကိုတည့်တည့်မတ်မတ်
သွားပါတယ်။ ရေတွင်းနဲ့ ကပ်ရပ်မှာရှိနေတဲ့ စဉ့်အိုးကြီးထဲကရေကိုခပ်ပြီး အိမ်ထောင့်နားကစပါးလင်အုံ ကိုလှမ်းပြီး ရေနဲ့ ပက်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းဆိုရင် ကျမတို့ ဖက်ကတအားအေးတာ..။ရေဆိုရင်မထိ
ချင်ဘူး။အေးစက်ခဲနေတာဘဲ။ အမက သူရေအိမ်ကထွက်လာတော့ လှမ်းအော်ပါတယ်။မြန်မြန်လုပ် မီးငယ်
မီးမိတ်တော့မှာ..။ကျမဆက်ခါဆက်ခါနဲ့ လောင်းတာ ဘာဖြစ်လို့ လဲမသိပါဘူး..။၄ခါလောက်လောင်းပြီး
တော့..အီး..အား..အူး..ဆိုတဲ့အသံတွေ အဲဒီစပါးလင်ခြုံထဲကနေထွက်လာတယ်...။ အို..သတ္တိခဲ မယ်ငီးဘဲ
ပြေးတာတန်းနေတာဘဲ..မမလည်းပြေးတယ်..။အိမ်တံခါးကိုမပိတ်ခဲ့ကြဘူး..။အိမ်ရှေ့ ကနေ အပြင်ထွက်ပြီး
အိမ်နီးနားချင်းကို အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းရတာပေါ့..။နောက်တော့ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေလာကြ တယ်။ အော်...ညဦးကတဲက ခိုးဖို့ စောင့်နေကြတဲ့ သူခိုး၂ယောက်မိသွားပါတယ်။သူတို့ ကအေးနေတာ
ရေနဲ့ ထပ်တွေ့ တော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေ...အော်တော့တာပေါ့...။
ကဲ...မယ်ငီးမှာ sixth sense ရှိပါတယ်ဆို... :))))
နောက်ယိုးဒယားမှာကြုံခဲ့တဲ့ sixth sense ကိုတော့ နောက်တခါပေါ့နော်...ဟီး..
Posted by မီးမီးငယ် at 6:56 PM
Anonymous August 16, 2013 9:12 PM
မီးမီးငယ် August 18, 2013 1:32 PM
Anonymous August 16, 2013 11:31 PM
ကုိုယ်လည်းခဏခဏဖြစ်ဖူးကြုံဖူးတယ်။ မြွေနဲ့ လည်းကြုံဘူးတယ်။ ကံကောင်းလို့ မသေတာ။ မီးမီးလိုဘဲမြွေဟောက်ကြီး။
မီးမီးငယ် August 18, 2013 1:35 PM
သူခိုးနဲ့ တွေ့ တော့ ဘာတွေဘာတွေသေးလဲ..
I also like you,I had such many experience like you.
မီးမီးငယ် August 18, 2013 1:36 PM
so, we are the same side :)
San Htun August 19, 2013 9:36 AM
တွေ့ လား ဒါကြောင့်ပြောတာ စာဆက်ရေးပါလို့ ..ပြောပြစရာတွေ အများကြီး ရှိတယ့်ဟာကို..း) sixth sense ဆိုတာ ကြားသာကြားဖူးပြီး တခါမှမကြုံဖူးသေးဘူး..စိတ်ဝင်စားဖို့တအားကောင်း...ဘန်ကောက်က sixth sense ကိုလည်း မျှော်နေကြောင်းဗျား...
မီးမီးငယ် August 20, 2013 4:35 PM
ဟန်ကြည် August 20, 2013 7:58 AM
ဒီပြည်နယ်မှာတော့ အနှီကစားနည်းကို အံကလုံလို့ ခေါ်ကြပါသဗျား...အတုံးကြီး သုံးတုံးနဲ့အားမရလို့ ဧရာမအတုံးကြီးခြောက်တုံးကို လူလက်ခုပ်တစ်ဖောင်လောက်အမြင့်မှာ တင်ထားပြီး ဆွဲလိုက်ကြတာများ တဒုံးဒုံးနဲ့ နားကွဲမတတ် ( စပ်မိလို့ပြောရရင် အညာမှာတော့ အနှီကစားနည်းကို ဂလုံးဂလုံးလို့ ခေါ်သဗျ မြည်သံစွဲနဲ့ ခေါ်လိုက်တာဖြစ်မယ် )တစ်ခါသားမှာ အိမ်ဘေးကွက်လပ်မှာ အနှီဂလုံးဂလုံးလာဖွင့်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ အိပ်ရေးပျက်လိုက်တာမှး)
တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ် ဒေါ်မီးရေနဲ့လှမ်းပက်လိုက်တဲ့ သူခိုးနှစ်ကောင်က ပစ္စည်းခိုးဖို့လာတာမဟုတ်ဘဲ...လူခိုးဖို့ လာတာများလားလို့ ဟဲ ဟဲး)
မီးမီးငယ် August 20, 2013 4:40 PM
ကိုယ်တို့ လည်းပွဲဆိုတာနဲ့ ထိပ်ဆုံးကထိုင်ပြီးကစားတတ်ပါတယ်။
အဲ..ဖွ..ဟုတ်ရပါဘူးတော်..သူတို့ ကမြို့ ထဲကနံမည်ကြီး
တရုတ်တယောက်ရဲ့ သားတော်မောင်နဲ့ အပေါင်းဖော်တွေ
ဆုမြတ်မိုး August 22, 2013 3:05 AM
မမီးရယ်....အတွေ့အကြုံတွေကလည်းစုံတယ်နော် ။ ဆုမြတ်တော့ ဆဌမအာရုံရှိမရှိမသိဘူး ။
အတွေ့အကြုံတော့ရှိတယ် ။ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေကျောင်းကိုတစ်ရက်လာလည်မယ်ပြောထားဖူးတယ်။ စိတ်ထဲမရှိဘဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုပြောလိုက်တယ်..ဒီနေ့အဲတစ်ယောက်ကျောင်းကိုလာမယ်ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာ တကယ်ပဲနေ့ခင်းကျောင်းဆင်းချိန်မှာ အဲဒီအုပ်စုတွေရောက်လာကြတယ်..။ ဘာမှလည်းအဆက်သွယ်မလုပ်ဘဲ အလိုလိုသိနေတာလေ...။
တခါတခါဆိုရင် အိမ်တံခါးပွင့်နေလိမ့်မယ် သော့ထုတ်စရာမလိုဘူးဆိုပြီး စိတ်ထဲမရှိဘဲဒီအတိုင်းပြောလိုက်မိတယ်...။ တကယ်လည်းတံခါးက လော့ခ်မချထားဘူး (ဆုမြတ်က အိမ်ကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး...) ။ ပါးစပ်က လွှတ်ခနဲထုတ်ပြောလိုက်ရင် တကယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်..။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိ။ ဆဌမအာရုံမရှိတာတော့သေချာပါတယ် ။ဆက်ရေးပါဦးနော်
မီးမီးငယ် August 22, 2013 11:40 AM
အဲဒါတွေကိုခြုံလို့ ဆဌမအာရုံ ဆိုပြီးနံမည်တပ်တယ်လို့ ထင်တာပါဘဲလေ။
note 10.1 နဲ့ ဖတ်ရင်တော့ရတယ်။
ကွန့် မန့် ပေးလို့ ရဘူး..ရယ် :((
ဆုမြတ်မိုး September 06, 2013 4:47 AM
အဲ..အခုမှပဲသိတယ်..မမီးရယ်..။ ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူး ။ chrome နဲ့စမ်းကြည့်ပါလားဟင်..။ chorme မှာဆိုရင် MyanmarFontTagger 2.0.2 extension ကို enable လေးလုပ်ကြည့်ရင် မြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်မမီးရယ်..အဲဒါလုပ်လို့လည်းမမြင်ရသေးဘူးဆိုရင်ပြောပါဦးနော်..။
မီးမီးငယ် September 08, 2013 11:40 PM